Sizihambisa njani ngokuFakela ukufakwa kweWindowsPress | Martech Zone
Ungathanda ukucinga ukuba ukuhambisa indawo yakho yeWordPress ukusuka kwenye indawo yokusingathwa ukuya kwenye kulula ngokwenene, kodwa kunokuba yinto ephazamisayo. Ngokwenene sasinceda umthengi phezolo egqibe kwelokuba asuke kwenye inginginya aye kwenye kwaye ngokukhawuleza yajika yaba siseshoni yokusombulula ingxaki. Benze into abaqhele ukuyenza abantu-bayikhuphile yonke into, bathumela iziko ledatha, bayisa kwiserver entsha kwaye bangenisa iziko ledatha. Kwaye kwenzeka… iphepha elingenanto.
Ingxaki kukuba yonke imikhosi ayenziwanga ngokulinganayo. Uninzi luneenguqulelo ezahlukeneyo zeApache ezineemodyuli ezahlukeneyo ezisebenzayo. Abanye banemicimbi yemvume emnandi ebangela iingxaki ngokulayisha iifayile, zibenze zifunde-kuphela, kwaye zibangele imiba yokulayisha imifanekiso. Abanye baneenguqulelo ezahlukeneyo ze-PHP kunye ne-MySQL -ingxaki eyoyikekayo kwishishini lokubamba. Ezinye i-backups zibandakanya iifayile ezifihliweyo ezenza umonakalo kumbuki owahlukileyo ngenxa yokugcina i-caching kunye nokuhanjiswa kwakhona kwiiseva.
Ewe kunjalo, oku akubandakanyi ukufakelwa kwemida. Ngokwesiqhelo ngumbandela wokuqala ukuba unofakelo olukhulu lweWordPress… ifayile yedatha inkulu kakhulu ukuba ingalayishwa kwaye ingeniswe nge-MySQL admin.
Kukho izixhobo ezilungileyo apha phandle zokunceda, njenge I-CMS ukuya kwi-CMS. Unokusebenzisa eyakho i-Automattic VaultPress service-gcina nje isiza, faka i-WordPress entsha kumamkeli omtsha, faka iVaultPress kwakhona, kwaye ubuyise indawo kwakhona. Aba bantu benze umsebenzi olungileyo ekusebenzeni kwimicimbi emininzi oya kuthi ungene kuyo xa uzama ukufuduka iwebhusayithi.
Nangona kunjalo, sihlala sihamba sodwa kwezi zinto kwaye, okubuhlungu, sihlala sizenza ngokwethu. Ndiyayithanda into entsha yokufaka xa usiya kumamkeli omtsha endaweni yokurhuqa naziphi na iingxaki nathi. Nanga amanyathelo esisisebenzisayo:
We yogcino ufakelo lonke kunye nendawo kwaye uyikhuphele ekuhlaleni ukuze igcinwe ikhuselekile.
We thumela ngaphandle isiseko sedatha (ayihlali ifakiwe kunye ne-backups) kwaye uyikhuphele ekuhlaleni ukuze igcinwe ikhuselekile.
We faka iWindowsPress entsha kwiseva entsha kwaye uyenze isebenze.
We yongeza iplagi enye ngexesha Ukuqinisekisa ukuba zonke ziyahambelana kwaye ziyasebenza. Abanye abaphuhlisi beplagi benze umsebenzi olungileyo wokubandakanya useto lwabo kwizixhobo zokuthumela ngaphandle okanye ukubonelela ngezabo iisetingi zokuthumela kunye nokungenisa elizweni.
We thumela umxholo ukusuka kwindawo ekhoyo usebenzisa isixhobo sokuThumela ngaphandle seWordPress esakhelwe ngaphakathi kwiWordPress.
We ukungenisa loo mxholo kwindawo entsha usebenzisa isixhobo sokungenisa seWordPress esakhelwe ngaphakathi kwiWordPress. Oku kufuna ukuba ukongeze abasebenzisi ... kancinci kwaye unomdla kumzamo.
We FTP umxholo we-wp / wokulayisha apho zonke iiasethi zeefayile zethu ezilayishiwe zikwiserver entsha, ukuqinisekisa ukuba iimvume zefayile zibekwe ngokufanelekileyo.
Sibeka ifayile ye- useto lweempazamo.
We zip up umxholo kwaye uyifake usebenzisa isifaki somxholo seWordPress.
Sibeka umxholo bukhoma kwaye yakha iimenyu kwakhona.
We yenza kwakhona iiwijethi kwaye ukope / uncamathisele imixholo njengoko kufuneka ukusuka kumdala ukuya kwiseva entsha.
We caba indawo ukujonga nayiphi na imiba eneefayile ezingekhoyo.
We uphonononge ngesandla onke amaphepha zesiza ukuqinisekisa ukuba yonke into ijongeka ilungile.
Ukuba yonke into ijongeka ilungile, siza kuyenza hlaziya useto lwethu lwe-DNS ukwalatha kumamkeli omtsha kwaye uphile.
Siza kuqinisekisa ukuba Vimba useto lokuKhangela kuseto lokuFunda kukhubaziwe.
Songeza nayiphi na I-CDN okanye i-caching iindlela ezivunyelwe kumamkeli omtsha ukuze indawo ikhawuleze. Ngamanye amaxesha le yiplagin, ngamanye amaxesha iyinxalenye yezixhobo zomsingathi.
Siza bhala kwakhona indawo kunye nezixhobo zeWebmasters ukubona ukuba kukho naziphi na iingxaki ezibonwa nguGoogle.
Siza kuyigcina indwendwe endala kangangeveki okanye njalo… xa kunokwenzeka kubekho ingxaki ethile eyintlekele. Emva kweveki okanye usebenze kakuhle, siya kukhubaza umphathi wamandulo kwaye sivale iakhawunti.
tags: wordpress yokugcinacms ukuya kwiisentimithaindlela yokufuduka kwi-wordpresshambisa iWindowsPresshambisa iwebhusayithihambisa i-wordpressfaka kwakhona i-wordpressbuyisela i-wordpressVaultPressukhuphelo lwegamaUkubuyisela kwakhona i-wordpressZip igama lokushicilela